“Aabahey wuxuu dhaar kumarey inaanan guursan”
Inkabadan 10sano ayaan laliitey culeyska labada waalid ee da’ada ah! Labadoodaba midna masoconkaro. Midkiiba wuxuu ubaahanyahey daryeel daawo, nafsiyan iyo fisitarbia intaba. Labadaba waxaay kor udhaafeen 70kii.! Sidoo kale baahiyo kala duwan ayuu leeyahey midkastaba iyo waqtiyo kala duwan oo loo adeego! Midkastana aniga ayuu isugayaa oo majiro qofkale oo igu caawinaya howshooda. (qoraalka oo dhan